Posted by Tranquillus | Jul 29, 2021 | Xirfadaha hadalka iyo qoraalka afka
Farriimaha maqan waa qoraal shaqo oo muhiim ah. Laakiin sababo badan awgood, waa la iska indho tiri karaa. Taas waxa lagu macneeyaa nuxurka qoraalkooda iyo mararka qaarkood iyadoo aan la tixgalinayn saamaynta ay ku yeelan karaan.
Runtii, farriinta maqnaanshaha waa farriin otomaatig ah. Loo diray jawaab ahaan farriin kasta oo la helay muddo u dhexaysa gudaheeda ama muddo cayiman gudaheed. Mararka qaarkood farriinta waxaa loo diyaariyaa macnaha guud ee fasaxa. Xilligaan, marka laga yaabo inaad maskaxdaada meel kale ku haysato, waxaa laga yaabaa inaysan ahayn waqtiga ugu fiican ee aad qorto farriintaada.
Waa maxay ujeeddada habaynta farriinta maqnaanshaha otomaatiga ah?
Maqnaanshaha farriinta shaqada ayaa siyaabo badan muhiim u ah. Waxaa loo isticmaalaa in lagu ogeysiiyo maqnaanshahaaga dhammaan shaqaalahaaga. Waxay kaloo u adeegtaa inay bixiso macluumaad u saamaxaya inay sii wataan hawlahooda iyagoo sugaya inaad soo noqoto. Macluumaadkani inta badan waa taariikhda bogsashadaada, faahfaahinta xiriirka gurmadka si laguula soo xiriiro ama faahfaahinta xiriirka saaxiib si aad ula xiriirto marka ay jirto xaalad degdeg ah. Marka la eego arrimahan oo dhan, farriinta maqnaanshuhu waa ficil lagama maarmaan u ah isgaarsiinta xirfadle kasta.
Waa kuwee khaladaadka laga fogaado?
Marka la eego muhiimadda ay leedahay farriinta maqnaanshaha, dhowr cabbir waa in la tixgeliyaa si aysan u naxdin ama u ixtiraamin la -taliyahaaga. Waxaa ka fiican inaad u dhawaaqdo si aad u ixtiraam badan ixtiraam darrada. Markaa ma isticmaali kartid tibaaxaha sida OUPS, pff, iwm. Waxaad u baahan doontaa inaad tixgeliso astaanta dhammaan daneeyayaasha. Markaa, iska ilaali inaad wax u qorto sidii inaad la hadlaysid dadka aad wada shaqaysaan oo keliya marka madaxdaada ama macmiishaada, alaab -qeybiyeyaasha, ama xitaa mas'uuliyiinta dowladda ay kuu soo dirayaan farriin.
Si looga fogaado dhibkaan, waxaa suurtogal ah in Muuqaalka la helo farriin maqnaansho ah oo loogu talagalay waraaqaha shirkadda gudaha iyo farriin kale oo loogu diro mailsadaha dibadda. Si kastaba ha noqotee, waa inaad tixgelisaa dhammaan astaamaha si aad u soo saarto farriin maqnaansho oo habaysan.
Intaa waxaa dheer, xogtu waa inay noqotaa mid waxtar leh oo sax ah. Ka fogow farriimaha aan mugdiga lahayn sida “berri waan maqnaan doonaa” adigoo og in qofkii hela xogtan uusan awoodi doonin inuu ogaado taariikhda “berri”.
Ugu dambayn, iska ilaali inaad adeegsato cod la yaqaan oo aan caadi ahayn. Runtii, farxadda fasaxa indhahaaga ah ayaa kugu sababi kara inaad adeegsato cod aad u yaqaan. Xusuusnow inaad sii ahaato xirfadle ilaa dhammaadka. Af ahaan saaxiibbadaa tani way dhici kartaa laakiin gaar ahaan ma aha marka la eego waraaqaha shaqada.
Waa maxay nooca farriinta maqnaanshaha ee la dooranayo?
Si aad uga fogaato dhammaan godadkaas, dooro qaab caadi ah. Tan waxaa ku jira magacyadaada hore iyo kuwa dambe, macluumaadka ku saabsan goorta aad ka baaraandegi karto farriinta la helay iyo qofka (dadka) la xiriira haddii ay dhacdo xaalad degdeg ah.
Fiiro gaar ah u yeelo fariinta maqnaanshaha ee sanduuqaaga boostada Oktoobar 15th, 2021Tranquillus
horeKu qor emayl jawi xirfad leh
socdaTababbarka xirfadaha dhijitaalka ah iyadoo la abaabulayo CPF -gaaga iyo kaalmada Dawladda, waa suurtogal!